ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူကုန်ကူးခံရမှုတွေအကြောင်း တင်ပြချက် — မြန်မာဌာန
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာ၊ လာအိုနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့က အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေ ဘယ်လို ဘယ်ပုံ လူကုန်ကူးခံရတယ် ဘယ်လို အဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံတွေ့နေကြရတယ် ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာကို UNODC ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးနဲ့ ဒုစရိုက် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် T.I.J. တရားဥပဒေသိပ္ပံတို့က ပူးပေါင်း ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဦးခင်မောင်ညိန်းက တင်ပြထားပါတယ်။
စာမျက်နှာ ၂၆၀ ရှိတဲ့ အဲဒီ လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ မှာ မြန်မာ၊ လာအိုနဲ့ ကမ်ဘိုးဒီးယားနိုင်ငံတို့က ကျားမ ရွယ်စုံ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တရားဝင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ပုံ၊ တရားမဝင်သွားရောက်ကြပုံ၊ ဘာဆွဲဆောင်မှုကြောင့် သွားကြပုံ၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ အလုပ်သမားအဖြစ်၊ လိင်လုပ်သားအဖြစ် လူကုန်ကူးခံရပုံတွေ၊ လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းရရှိဖို့ ငွေပေးကြရတာတွေ၊ လူပွဲစားတွေ ခြေရှုပ်ကြပုံတွေ၊ ကူကုန်ကူးတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ စတဲ့ အကြောင်းရပ်တွေကို နိုင်ငံအလိုက် အခန်းအလိုက် ခွဲခြားပြီး ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့အသေးစိပ် ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
သုံးနိုင်ငံစလုံးဟာ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ကြပြီး လူတွေဟာ ပညာရေး အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျကြတဲ့အတွက် ပွဲစားတွေရဲ့ လှည့်ဖျားမှုနဲ့ အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုဒဏ်တွေကို ခံကြရတယ်လို့လဲ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
လူမှောင်ခိုကူးသမားတွေဒဏ်ခံရတဲ့ အဲဒီ အလုပ်သမားတွေဟာ ဘာသာစကား မကျွမ်းကျင်မှု၊ တရားမဝင် နေထိုင်သူအဖြစ် ဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေး စိုးရိမ်မှု၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို လက်လှမ်းမမှီမှု၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးနဲ့ ဥပဒေရေးရာ မသိနားမလည်မှုတွေကြောင့် ခေါင်းပုံဖြတ် အနိုင်ကျင့်မှုတွေ လူကုန်ကူးမှုတွေကို ခံစားနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ တရားမဝင်ရောက်ရှိလာတဲ့ နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားတွေဟာ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး နဲ့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ထိုက်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေမရပဲ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံရတာတွေလည်း မကြာခဏကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက တရားဝင်သွားလုပ်သူတွေကရော ဘာကြောင့် အခက်အခဲ ပြသနာတွေ ကြုံနေရတာလဲလို့ ဘန်ကောက်မြို့မှာ မြန်မာလုပ်သားတွေရဲ့ အခက်အခဲ မျိုးစုံကို ကူညီ ဖြေရှင်ပေးနေတဲ့ အေအေစီအဖွဲ့က ဦးခိုင်ကို မေးကြည့်လိုက်တော့ သူက …
( အဲဒါက မြန်မာသံရုံးက ကူညီစောင့်ရှောက်မှု အားနဲလို့ဗျ။ သူတို့ သံအရာရှိတွေက ကူညီပါတယ်။ ကူညီတာတွေက သူတို့ law ဥပဒေ အတိုင်းပဲ ကူညီတယ်။ ပြသနာတွေက သူတို့ ဥပဒေ ပြင်ပမှာ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီ အပြင်ဘက်ကဟာတွေကို ကျနော် သံရုံး သံ အရာရှိတွေက အပြင်ဘက်ကို ထွက်ပြီး ပရဟိတလုပ်နေတဲ့ လူတွေ၊ အလုပ်သမားအရေးလုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေနဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေး မနေတဲ့ အတွက် သူတို့ အပြင်မထွက်ရဘူး။ ဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်တော့ ဥပဒေ အပြင်ဘက်က ပွဲစားလုပ်နေသူတို့၊ မတရားလုပ်နေတဲ့ ထိုင်း မြန်မာ အေဂျင်စီတွေက သူတို့ လုပ်မြဲအတိုင်း လုပ်နေတဲံ့အတွက် တရားဝင်လာတဲံ အလုပ်သမားတွေက ဒုက္ခရောက်နေတာဗျ။)
ဒါ့အပြင် UNODC အစီရင်ခံစာမှာ တရားမဝင်ရောက်ရှိလာသူတွေထဲက အသက်ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ ကလေးတွေဟာ လူကြီးတွေထက် ပိုပြီး အန္တရယ်များကြောင်း၊ သူတောင်းစားတွေအဖြစ်ခိုင်းစေခံရမှုနဲ့ လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အဓမ္မခိုင်းစေခံနေရမှုတွေ ရှိနေကြောင်း၊ အရင်က ကလေးပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းဟာ ဖိလစ်ပိုင်မှာ အများဆုံးရှိရာကနေ အခု ထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်နေကြောင်း၊ အရွယ်မရောက်သေးသူလေးတွေကို လိင်ဆက်ဆံလိုတဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးသည်တွေ များပြားလာနေတဲ့ အချက်ဟာလာအိုတို့ ကမ်ဘိုးဒီးယားတိုကနေ လူကုန်ကူးမှု တိုးပွားလာမှုနဲ့ ဆက်စပ်နေကြောင်းလဲ ဖေါ်ပြပါတယ်။
မြန်မာကလေးလုပ်သားတွေနဲ့ ပတ်သကိလို့ ဦးခိုင်ကတော့ ... "၂၀၁၁ ကနေ ၂၁၁၄ အထိကို ကလေး လုပ်သားတွေ ဒီမျာ အမျာဒးကြီးတွေ့၇တယ်။ shelter ဆိုတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေစခန်းတွေမှာ ထားပြိးတော့ မိဘတွေနဲ့ ဆက်သွယ်လို့မရသူတွေ အခုထိ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၄ ကနေပြီးတော့ ၂၀၁၅. ၂၀၁၆ တို့မှာ နဲနဲ သက်သာတဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ ထိုင်းက ဥပဒေအသစ်ထုတ်လိုက်လို့ နဲနဲ ပါးလာပါတယ်။ ကလေးလုပ်သားတွေ ဒုက္ခရောက်တာ နဲသွားတယ်" လို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံကို မြန်မာနိုင်ငံက တရားမဝင်လာရောက်သူ အများအပြားဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကဖြစ်ပြီး သူတို့ထဲက တချို့ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံက တဆင့်လာကြတာဖြစ်ကြောင်း၊ လူမှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေက သူတို့ကို ကမ်းခြေ ကနေ စက်လှေငယ်တွေနဲ့ခေါ်ယူပြီး ကမ်းလွန်ပင်လယ်က ဆုံချက်မှာ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ သင်္ဘောတွေကို ပို့ဆောင်ပေးကြောင်း၊ သင်္ဘောတစင်းစာ လူပြည့်တဲ့အချိန်မှာ လူမှောင်ခိုသင်္ဘောတွေဟာ အန္ဒရယ်များလှတဲ့ ကပ္ပလီပင်လယ်ကို စတင်ဖြတ်သန်းကြကြောင်း စသဖြင့်လည်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာ၊ လာအို နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကနေ ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့အလုပ်သမား ၄ သန်းလောက်အနက် ၉ဝ%ဟာ တရားမဝင် ခိုးဝင်လာသူတွေဖြစ်ပြီး လူကုန်ကူးမှုကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေ လက်တွဲပြီး ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ အဲဒီ ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ဒုစရိုက် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ UNODC နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတရားဥပဒေသိပ္ပံ Thai Institute for Justice အဖွဲ့တို့ ရဲ့ လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာက တိုက်တွန်း ရေးသားထားပါတယ်။